Swan oo shaaciyey in halis weyn ay ka jirto Somalia - Caasimada Online
Home Warar Swan oo shaaciyey in halis weyn ay ka jirto Somalia
Swan oo shaaciyey in halis weyn ay ka jirto Somalia
Muqdisho (Caasimada Online) – Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan oo khudbad ka jeediyey kulan ay Golaha Ammaanka ka yeesheen xaalada Somalia ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah iyo isbedalka ka dhacay dalka.
Swan oo marka hore khudbaddiisa uga hadlay doorashooyinkii soo dhammaaday ayaa sheegay in QM ay diyaar u tahay inay la shaqeyso dowladda cusub ee Soomaaliya.
“Dhammaan nidaamka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waa mid diyaar u ah inuu la shaqeeyo dawladda cusub si loo taageero yoolalkan la wadaago” ayuu yiri.
Wakiilkada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in Soomaaliya ay weli ka jirto halis aad u weyn, taas oo ka dhalatay xaaladda bani’aadanimo ee dalka.
Danjiraha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay wajaheyso xaaladdii ugu adkeyd ee dhanka nolosha, taas oo ka dhalatay abaaraha markale ku dhuftay Soomaaliya.
“Xaaladda bini’aadantinimo ee Soomaaliya ay ka sii darayso. Dalku waxa uu wajahayaa khatar aad u weyn oo macaluul ah deegaanno ay ku nool yihiin lix bulsho haddii qiimaha cunnada uu sii kordho, gargaarka bini’aadannimadana aan la joogteyn,” ayuu sii raaciyey.
Soomaaliya ayaa waxaa marar badan kusoo laa laabtay abaaro xoogan oo saameeyey nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha dalka.